विपश्यनाबाट विरक्तिएका एक चिकित्सकको अनौठो अनुभव
आज : २०७६ श्रावण ८, बुधबार / Wednesday, Jul 24, 2019
विपश्यनाबारे मसँग सामान्य अल्पज्ञान मात्र थियो । अनेक जुक्ति र कष्टकर तपस्या गरेर विभिन्न स्थानमा ज्ञानको खोजीमा भौँतारिँदा पनि गौतम बुद्धले जीवनको सत्यसम्म पुग्न नसकेपछि यसको आविष्कार भएको हो । उनले सत्यको प्राप्ति नभएसम्म हलचल नगरी, हातखुट्टा र आँखा नखोली पद्मासनमा बसेर ज्ञान प्राप्त गरे । यही ध्यानलाई विपश्यना ध्यान भनिन्छ भन्ने मात्र मलाई थाहा थियो ।
बुद्वको पालामा भारतीय समाजमा यसको प्रयोग हुन्थ्यो र पछि भारतवर्षबाट यो ध्यानविधि नै लुप्त भएको हो भन्ने पनि मलाई सामान्य ज्ञान थियो । तर, त्योबाहेक मसँग अरू जानकारी र अनुभव थिएन । बेलाबेला मैले उपचार गर्दै गरेका कतिपय बिरामी विपश्यना ध्यानमा बस्न जाने इच्छा व्यक्त गर्दै मेरो सहमति खोज्थे । अल्पज्ञानले गर्दा म ठोस सल्लाह दिन सक्दिनथेँ । अक्सर मेरो मनसाय सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नै रहन्थ्यो । म बुद्ध भगवानले जीवन दर्शन र सत्यको खोजी गर्न प्रयोग गरेका विधि पक्कै पनि जटिल र कठिन हुनुपर्छ भन्ने सोच्थँे । त्यसमाथि आध्यात्मिक ज्ञान र सरल विधि पार गरेपछि मात्रै विपश्यना उपयुक्त होला, त्यो पनि सशक्त र स्वस्थ व्यक्तिका लागि भन्ने मलाई लाग्थ्यो । रोगले कमजोर पारेको मनलाई विपश्यना जस्तो विधिमा लगाउन खोज्दा मनले नथाम्ला र झन् तनाव बढ्ला भन्ने मेरो डर थियो । अझ बिरामीलाई त्यहाँ पठाउँदा विपश्यना बीचमै छोडेर आउनुप¥यो भने के होला भन्ने म ठान्थेँ ।
म बिरामीसँग यस्तै–यस्तै तर्क गर्थें र यहीअनुसारको सल्लाह पनि दिन्थँे । कतिलाई चित्त बुझ्थ्यो भने कतिलाई चाहिँ यस्तो सल्लाह मन पर्दैनथ्यो । कति बिरामी त मसँग बहस गर्न उत्सुक हुन्थे । अरू क्षेत्रका चिकित्सकसँग बिरामीको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ म भन्न सक्दिनँ । साइकियाट्रिस्टलाई
चाहिँ बिरामीले आफ्नो डाक्टरलाई भूगोलको ज्ञाता, इतिहासको विज्ञाता, दर्शनको पारखी, अध्यात्मको साधक, विज्ञानको सोधकर्ता, मनोविज्ञानको हर्ताकर्ता र सम्पूर्ण ज्ञानको भण्डार ठान्छन् । विचरा साइकियाट्रिस्ट ! चिकित्साशास्त्रको सामान्य विद्यार्थी र धेरथोर मानव स्वभावको ज्ञान राख्दै रोग चिनेर केही औषधि, केही वार्तालाप गरी बिरामीको मनका उद्वेगलाई धेरथोर शान्त पार्ने पेसाकर्मी !
म पनि औसत साइकियाट्रिस्टभन्दा भिन्न छैन । मेरो दिनचर्या पनि रोग ठम्याउन कोसिस गर्ने, घोषित सूत्र प्रयोग गरी ओखतीमूलो गर्ने या नरम बातचित गरेर मन शान्त पारिदिने काममै सीमित छ ।
बिरामी र मेराबीच कुनै गम्भीर प्रश्न तेर्सिएपछि म सङ्कटमा पर्छु । एकपटक केही समयअगाडि एकजना दर्शनशास्त्र पढेर जे कृष्णमूर्तिका अनुयायी बनेका व्यक्ति मसँग परामर्शका लागि आए । उनको समस्या मानसिक स्वास्थ्यसँग भन्दा बढी दार्शनिक पक्षसँग सम्बन्धित थियो । उनी मसँग मन, चेतना, अर्धचेतना, समवेदना आदि विषयका शब्द र परिभाषामा बहस गर्थे । उनी मलाई र सत्यमा पुग्नु कुनै मार्ग, साधन या विधि चाहिँदैन भन्दै जे कृष्णमूर्तिको दर्शनसँग मलाई परिचित गराउँथे ।
एक दिन उनले मलाई विपश्यना ध्यानबारे सोधे । मैले अरू बिरामीलाई जवाफ दिएजस्तै उनलाई पनि ‘विपश्यनाबाट तपार्इंलाई फाइदा होला र रु’ भन्ने प्रतिप्रश्न गरेँ । उनले मलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘तपार्इंले विपश्यना ध्यानमा आफैँ बसेर अनुभव गर्नुभएको छ रु’ मैले त्यो बेलासम्म विपश्यना ध्यानमा बस्ने सोच कहिल्यै बनाएको थिइनँ, साँचो त बोल्नै प¥यो । आफँैले अनुभव नगरेको कुरामा थाहा छ भन्नु पनि भएन । मैले मलाई कहिल्यै यो कुरा दिमागमा नै नआएको बताएँ । मैले व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा केही भन्न नसके पनि अड्कलको भरमा यो एउटा कठिन र विशेष खालका साधकका लागि गरिने साधना भएको र यो साधना स्वास्थ्य लाभका लागि भन्दा पनि आध्यात्मिक उपलब्धि र मुक्तिका लागि गरिने हो कि भन्ने कुरा गरेँ । मैले मानसिक समस्या समधानका लागि यो बाटो उपयुक्त हुन नसक्ने बरु उल्टै ध्यान अवधिमा तनाव र कष्टले मन दुर्बल हुने आशंका अघि सारेँ ।
मेरो उत्तरबाट बिल्कुलै असहमत हुँदै ती खोजकर्ताले जवाफ दिए, ‘तपार्इं कमसेकम एक पटक मात्रै भए पनि आफैं विपश्यना ध्यान बसेर अनुभव गर्नुभयो भने अरूलाई ठीक सल्लाह दिन मिल्छ । आफैंले अनुभव गर्नुभएको छैन भने कसरी त्यसबारे अरूलाई सल्लाह दिनु ! ’
मलाई आफ्नो कमजोरीका कारण लाज लाग्यो । कमसेकम बिरामीले सोध्दा सही सुुझाव दिन पनि म आफैँ ध्यानमा बस्न जरुरी छ भन्ने सोच्न थालेँ । मैले आफ्नै मानसिक आराम र शान्तिका लागि पनि विपश्यना जाने सोच बनाएँ । विपश्यना ध्यानप्रति मेरो चाख जागेको २ वर्ष भइसक्दा पनि मैले १० दिनको समय मिलाउन सकिरहेको थिइनँ । अर्को कुरा आफूले चाहनेबित्तिकै ध्यानमा बस्ने मौका पनि नमिल्ने रहेछ । कमसेकम २–३ महिना अगाडि नै नाम लेखाए मात्र आफ्नो सिट सुनिश्चित हुँदोरहेछ । यो ध्यान यति बढी लोकप्रिय भएको र मौका पाउनै गाह्रो भन्ने सुनेपछि मलाई झन् चाहना बढेर आयो । कतिले ध्यान अवधिभर बोल्न, लेख्न, पढ्न, फोन गर्न, टिभी हेर्न र रेडियो सुन्न नपाइने भएकाले त्यो समय साहै्र निरस र पट्यारलाग्दो हुने सुनाएका थिए । ध्यान पनि शारीरिक पीडाका कारण साह्रै कठिन हुने उनीहरु बताउँथे । यति हुँदाहुँदै पनि युवा र विद्यार्थीमा यो ध्यान अत्यन्त लोकप्रिय बनेको सुन्दा मलाई यसको रहस्य आफैँ अनुभव गरेर जान्न मन लागेको थियो ।
सन् २००८ को अप्रिलतिर मैले विपश्यना ध्यानमा जाने निर्णय गरेर जुलाई १ मा सुरु हुने सेसनका लागि नाम लेखाएँ । धेरै अगाडि नै नाम दर्ता गरेको हुनाले मेरो स्थान सुनिश्चित भयो । यो अवधिमा मनमा विपश्यना ध्यान कस्तो होला, मैले के उपलब्धि पाउँला र म कसरी त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउँला भन्ने तर्क चलिरह्यो । म मानसिक रूपले पूरा तयार भएको थिएँ । जस्तै कठिन भए पनि त्यसलाई मैले मौकाको रूपमा लिँदै समर्पित हुनेछु भन्ने सोच बनाएको थिएँ ।
ध्यान शिविरमा बसुन्जेल मैले म डाक्टर हँु, साइकियाट्रिस्ट हुँ भन्ने खुलाउन चाहेको थिइनँ । त्यसैले अरू साधकसँगै ध्यान केन्द्रबाट उपलब्ध सवारीबाटै ज्योती–भवन पुगेँ । मिनीबसमा बसेर मेरो ध्यान कस्तो होला भनेर कल्पनामा डुबिरहेका बेला अकस्मात झ्याल बाहिरबाट ‘डाक्टर साब नमस्कार १ तपार्इं मलाई चिन्नुहुन्छ रु’ भन्दै एक भद्र पुरुष देखा परे । सुरुमा मैले उनलाई नचिने पनि केही समयको भलाकुसारीपश्चात् मैले चिनेँ । उनले अन्तिम पटक भेटेको ३६ वर्षपछि पनि त्यति सजिलै चिनेकोमा म आश्चर्यमा परेँ । तर, त्यहाँको वातावरण र उनी विपश्यना साधक भएकाले मलाई यति वर्षपछि पनि चिनेको हुनुपर्छ भन्ने ठानेँ । उनले मलाई सोधे, ‘दिनमा १० घन्टा ध्यान बस्नुपर्छ, सक्नुहुन्छ रु’ मैले ३ महिनाभन्दा लामो समयदेखि आफूलाई मानसिक रूपले तयार गरेको थिएँ । ‘धेरथोर विपश्यनाबारे सुनेको र पढेको छु । आफूलाई मानसिक र शारीरिक हरेक हिसाबले तयार पारेको छु ।’
हामी शिवपुरी जङ्गलको फेदमा रहेको शिविर केन्द्र धर्मश्रृङ्ग लाग्यौँ । बाटोमा सँगै बस्ने भद्र महिलाले परिचय सोधिन् । म चाहिँ अहिलेदेखि नै मौन किन सुरु नगर्ने भन्ने लागेर उनको प्रश्नको जवाफ नदिई झ्यालतिर फर्किएँ । मलाई आफू अहिलेदेखि नै साधनामा प्रवेश गरेकोमा आत्मगौरव भयो । ध्यान सुरु भएपछि कस्तो कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने त्यसबेला मलाई के थाहा र १
मध्याह्नपछि हामी शिवपुरी जङ्गलमुनि रहेको ध्यान शिविर पुग्यौँ । नियमित दर्ता, सामान बुझबुझारथपछि बेलुका ६ बजेतिर ध्यान शिविरबारे जानकारी भेला भयो । केन्द्रको तर्फबाट त्यहाँका गुरुदेवले हामीलाई ध्यान र नियमबारे जानकारी गराए । अन्तिम पटक हामी साधकहरुलाई सचेत गराउँदै उनले कसैलाई सन्देह छ र गाह्रो लाग्छ भने शिविर छोड्न सक्ने जानकारी दिँदै भने, ‘यो ध्यान शिविर निकै कष्टपूर्ण हुन सक्छ ।’
मलाई शिविरको तर्फबाट त ‘धर्म गर्नुहोस्, कष्ट भए पनि सहनुहोस्, जीवन शान्त र सन्तुलित हुन्छ, फाइदा हुन्छ’ पो भन्नुपर्ने त जस्तो लागिरह्यो । तर, त्यहाँ सक्नुहुन्न या आँट छैन भने अहिले नै फर्कनुहोस् भनिँदैथियो । मैले निकै पछिसम्म त्यो विचार र सल्लाह दिने नीतिको विश्लेषण गरिरहेँ । बुद्वको दर्शन र उनको पथ प्रदर्शन मार्गको सिद्धान्त अनुसार जीवनलाई दःुखकष्टको स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । सायद त्यसैले यो साधनाको मार्गलाई पनि कष्टै र पीडाको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेकाले साधकहरुलाई शिविर सुरु हुने केही मिनेट अगाडिसम्म पनि जीवन मात्रै हैन जीवनबाट मुक्ति पाउने विधि पनि कष्टकर र दुःखी छ भनेर याद दिलाइएको थियो ।
मलाई नमज्जा लाग्यो । ‘सहरी जीवनको कोलाहलबाट यो पवित्र र शान्त स्थानमा ध्यान गर्न आउनुभएकाले जति सक्नुहुन्छ, यसबाट लाभ लिनोस्, बाँकी फेरि अर्को शिविरमा आउनुहोला’ आदि भनिनुपथ्र्यो भन्ने मलाई लाग्यो । तर, त्यसको सट्टा ‘गाह्रो हुन्छ, आँट छैन भने छोडेर जानोस्’ भनेको मन परेन । तर पनि, यो त्यहाँको नियम होला अथवा यो पनि साधनाको एक प्रारम्भिक अभ्यास होला भनेर चित्त बुझाउनै प¥यो । हुन पनि त्यस्तै रहेछ । जीवन मात्र हैन, जीवनका कष्टबाट मुक्ति पाउने यो विधि पनि मलाई आनन्ददायी लागेन । जे होस् मैले विपश्यना ध्यान शिविरमा अन्त्यसम्म टिकेर बस्ने दृढ निर्णय चाहिँ गरेँ ।
त्यही दिन बेलुकाको सत्र सकेपछि हाम्रो मौन नियम सुरु भयो । बढी उत्साहका साथ म पहिलो ध्यानमा सामेल भए । आफू त्यति आध्यात्मिक सोचको व्यक्ति नभएकाले मलाई ध्यान कस्तो होला भन्ने लागेको थियो । ‘हात्ती आयो।।। फुस्स’ भनेजस्तो मलाई त आँखा चिम्लेर पलँेटी मारेर नाकको प्वालमा के भइरहेको छ त्यही मात्र मनले हेर्न भनियो । म नाकको प्वालमा हेर्न खोज्छु । तर, त्यहाँ आँखाले हेर्ने हैन, मनले हेर्ने हो । मनले त घरको आरामदायी शय्या र प्रियसीको साथमा समुन्द्र किनारमा आराम गरेको अनुभव सम्झन पुग्छ । यत्रो धैर्य र प्रतीक्षा गरेर आएको शिविरमा जाबो नाकको प्वाल हेर्ने, त्यो पनि मनले, निष्क्रिय तवरले १ नाकको प्वालमा के रहन्छ र साधकले के हेर्ने रु गुरुले भनेअनुसार त्यहाँ सास भित्र–बाहिर गरेको हेर्ने रे !
मानसिक रोगको डाक्टर भएकाले त्यसको के अर्थ हुन सक्छ भनेर म घोत्लिन थालँे । बेलुकाको प्रवचनमा केही प्रश्न र जिज्ञासा समाधान भए । प्रवचनको सिलसिलामा गुरुजीबाट श्वास–प्रश्वास नै जीवनको आधार हो भन्ने कुरा आयो । त्यो त ठीक लाग्यो । मान्छे खाना नखाए पनि कैयौँ दिन बाँच्छ र पानी नपिउँदा पनि कैयौँ घन्टा बाँच्छ भने सास फेर्न पाएन भने केही मिनेटमै जान्छ । त्यसैले स्वास–प्रस्वास चाहिँ साँच्चिकै महत्वपूर्ण जिउने आधार हो ।
तर, विपश्यनामा स्वास–प्रस्वासलाई स्वतः छाडिदिनुपर्ने रहेछ । मलाई यो धारणा बुझ्नै गाह्रो लाग्यो । सास आफँै आउँछ, जान्छ । तर, हामी यसलाई आफूभित्र लिने र बाहिर फाल्ने गरेका छाँै जस्तो लाग्छ । त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर राखेर आफू सासको आउने–जाने व्रmम मात्र हेरभन्दा केही अनौठो लाग्यो । सास भित्र–बाहिर हेर्न खोज्यो, मन कता हो कता दौडिन्छ । अनि फेरि डो¥यायो, केही सेकेन्ड ध्यान सासमा अडिन्छ । फेरि केही अगाडिको या कुनै पुरानो अप्रिय घटनाको याद आउँछ ।
ध्यान बस्न थालेपछि विस्तारै सासप्रतिको एकग्रता भन्दा पनि चुपचाप मौन रूपमा एउटै आसनमा बसिरहँदा पट्टयार लाग्छ । जीउ बाँधिने, जोर्नी दुख्ने, ढाड र आसन दुख्ने यति तीव्र हुन थाल्छ कि सासमा लगाउन खोजेको मन दुःखाइमा केन्द्रित हुन पुग्छ । हातखुट्टा सलबलाउन पाए र एकछिन दुःखाई कम भयो भने पनि आनन्दको अनुभूति हुँदोरहेछ । केही घन्टाको बीचमा ५ मिनेट विश्राम भयो भने हलबाट बाहिर निस्किएर हातखुट्टा तन्काउन पाउँदा नै पनि परम आनन्दको अनुभव हुने रहेछ ।
यसरी नाकको प्वालबाट सास भित्र–बाहिर गरेको हेर्दाहेर्दै ध्यान अगाडि बढ्छ । बिस्तारै ध्यान दुःखाइको पीडा र त्यसको छुट्काराबाट पाउने आनन्दको बीचबाट गुज्रन थाल्छ । पीडा–आनन्द, आनन्द–पीडा यो चक्त चलिरहन्छ । स्वास–प्रस्वासमा ध्यान दिइरहँदा मन भौँतारिने क्रम कम हुँदै जान्छ र एकाग्र हुन केही सजिलो हुन्छ ।
सास फेर्नु अविरल भइरहने कर्म मात्र नभएर जीवित रहनका लागि पहिलो अनिवार्य र पहिलो व्रिmया हो, यो निरन्तर र अविच्छिन्न छ । स्वास–प्रस्वास नै यस्तो शारीरिक व्रिmया हो, जुन हाम्रो जीवनसँग सधैँ जोडिएको हुन्छ । तर, हामी सामान्य दैनिक जीवनमा यस प्रव्रिmयामा कमै ध्यान दिन्छौँ । हाम्रो मन अनेकाँै विषयवस्तु र घटनाक्तममा दौडिने भएकाले यो सधैँ तनावपूर्ण, थकित र अव्यवस्थित रहन्छ ।
कुरो ठीकै लाग्यो । सम्पूर्ण ध्यान स्वासमा लगाउँदा पनि एकाग्र हुन गाह्रो काम रहेछ । ध्यान शिविरमा व्रmमशः हाम्रो ध्यान श्वास–प्रश्वासबाट नाक वरिपरिको स्थानमा, त्यसपछि नाकैमुनिको सानो भाग र त्यसमा हुने अनुभूतिमा केन्द्रित हुन थाल्यो । २४ घन्टाको दिनचर्यामा बिहान ४ः३० बजेबाट बेलुका ९ बजेसम्म ध्यान, त्यो पनि मौन बसेर बाहिरी संसारसँग विच्छेद भइरहँदा छुट्टै प्रकारको अनौठो भनुभूति हुन थाल्यो । समय नै मन्द गतिमा बगेजस्तो, वरिपरि सबै वस्तु निश्चल र गतिहीन भएजस्तो, आफ्नो मनले गर्ने आत्मविश्लेषण नै धिमा गतिमा गरेको हुन थाल्यो । शरीरमा हुने अनुभूतिमा मात्र केन्द्रित हुँदा एक प्रकारको एकोहोरो अवस्था हुँदै इन्द्रीयहरु शिथिल हुँदै गएको अनुभव हुन थाल्यो । विभिन्न मानसिक समस्या मनको एक निश्चित सीमाङ्कन भित्र पैदा हुन्छन् । त्यो सतह नै फरक रूपमा परिणत भएपछि त्यसमा उत्पत्ति हुने विकृति आफैँ हराउँछ ।
यो कुरालाई अलि सरल बनाएर दृष्टान्तमा पनि भन्न सकिएला । पोखरीको पानीमा विविध छाल उत्पत्ति भइरहेका छन्, एकाएक पोखरीको पानी जमेको पानी अर्थात् बरफमा परिणत भएपछि छालहरुको अस्तिङ्खव आफँै हराउँछ । अझ अर्को उदाहरण लिऊँ । एउटा धूलेपाटी छ, पाटीको धूलोको सतहमा विभिन्न शब्द कोरिएका छन् । अकस्मात त्यो पाटीको धूलोलाई घुलमिल गर्दा त्यहाँ शब्दहरु स्वतः मेटिन पुग्छन् ।
एउटा निश्चित एबचबमष्नm भित्र पैदा हुने मानसिक समस्या त्यो संरचना नै फेरिएपछि सायद छुट्छन् होला । त्यसै कारण मनमा परिवर्तन आएपछि त्यसका उपज मानसिक विकृति पनि हट्दै जान सक्छन् ।
केही दिन बितेपछि ध्यान झन् पट्यारलाग्दो हुन थाल्यो । सुरुका दिनमा अनुभव गरेको एकोहोरोपन र सुस्तताको अनुभव हुन छोडेपछि मन अलि चनाखो हुन थाल्यो । पाँचौँ÷छैटाँै दिनतिर विचार गर्न थालेँ, ‘किन मैले यो ध्यानमा बस्ने निर्णय गरेँ हुँला रु त्यति धेरै काम, व्यस्तता, बिरामीको चाप, अस्पतालको ड्युटी सबै छोडेर र सबै कुराबाट विच्छेद भएर मौन व्रतमा एकोहोरो ध्यानमा घन्टौं बस्न आउनु कति व्यावहारिक थियो रु म यस्ता प्रश्नका बीच घेरिएँ ।
मैले आफँै दोहो¥याएर आउने त कुरै छाडौँ, पछि कसैले सल्लाह माग्यो भने झुक्किएर पनि नजानू भन्छु भन्ने निर्णय गरेँ । मलाई विपश्यना ध्यानबाट कुनै फाइदा होला जस्तो लाग्नै छाड्यो । तर, बीचैमा छोडेर घर आउने विचार चाहिँ आएन । जतिसुकै कष्टकर भए पनि यसलाई अन्तिम दिनसम्म पु¥याएर मैले एउटा निष्कर्ष निकाल्नै छ । विपश्यना के हो र यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म निचोडमा पुग्नै थियो ।
ध्यानका दिन बित्दैजाँदा यसको अलि गहिरो र दार्शनिक पक्ष उजागर हुन थाले । सबै धर्मले आध्यात्मिक ज्ञान बाँड्छन र सुख–दुःखमा समभाव प्रदर्शन गर्न सिकाउँछन् । धर्मले सिकाइरहन्छ, धर्मगुरुले प्रवचन दिइरहन्छन्, मानिसचाहिँ उस्तै हुन्छन् । शताब्दियाँैदेखि नीति शिक्षा प्रचार भइरहे पनि मानिसको व्यवहार र सोचाइचाहिँ उस्तै छ । विपश्यनाका गुरु भन्छन्– प्रवचन सुनेर र धर्म शिक्षा पढेर मात्र मान्छे फेरिँदैन । उसले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सुख–दुःख दुवै अस्थायी हुन, आउँछन्, जान्छन् भन्ने आफैँ अनुभव गर्नुपर्छ । त्यसैले सुखप्रति लिप्त हुनु या दुःखप्रति विचलित हुनु जरुरी छैन । न सुख चीरस्थायी छ, न दुःख सधैँ रहन्छ । त्यसैले जीवनमा आउने दुःख र सुखप्रति हामीले समभाव राख्नुपर्छ । अर्थात् हामी समान र स्थिर रहनुपर्छ । तर, हामी रहन सक्दैनौँ ।
विपश्यना ध्यानले व्यक्तिलाई दुःख र सुख आफ्नै शरीरमा अनुभव गर्न सिकाउँछ । यो ध्यानले कसरी ती दुवै अनुभव अस्थायी र चीरस्थायी हुँदैनन् भन्ने कुरा सिकाउँछ । हामी आफ्नो जीवनमा दुःख र सुःख दुवै प्रत्यक्ष अनुभव गरेर दुवै अस्थायी हुन भन्ने आफँै महसुस गरेपछि यसलाई जीवनमा उतार्न सक्छौँ । यसरी दुःख–सुखप्रति समभाव जगाउनु नै विपश्यना ध्यानको मुख्य उद्देश्य रहेछ । लगातार घन्टौँ ध्यानमा बस्दा शरीरमा हुने पीडालाई दुःख र ध्यान गर्दा–गर्दा प्राप्त विशेष शारीरिक अनुभव (विपश्यनाको भाषामा समवेदना) नशा लागेजस्तै आनन्ददायक हुन्छ । त्यसलाई सुखको अनुभूति सम्झने, आउने जाने सबैलाई अस्थायी अनुभव भनेर बुझ्ने र मनमा समभाव जगाउने नै विपश्यनाको मूल चुरो जस्तो मलाई लाग्यो ।
सीमित ज्ञान र अनुभवको आधारमा विपश्यनाबारे गहिरो विवेचना गर्नु उचित नहोला । तर, मैले यो ध्यानको अर्को पक्षबारे केही कुरा भन्नैपर्छ । ध्यानको अन्तिम दिन मौनता तोडिएपछि हामी सबै साधक आपसमा कुराकानी गर्न थाल्यौँ । म विपश्यनाको आध्यात्मिक र दार्शनिक आयामको चर्चा गर्न चाहन्न । एउटा मात्र, त्यो पनि त्यति राम्रोसँग सफल हुन नसकेको शिविरको अनुभवबाट पच्चीस सय वर्ष अघिदेखि सुरु भएको र सिद्ध व्यक्तिले मुक्तिका लागि प्रयोग गरेको विधिको विवेचना गर्न खोज्नु धृष्टता हुन्छ । त्यो पक्षभन्दा म बरु साधकहरुको विविध अनुभव, प्रतिव्रिmया र विपश्यना ध्यानपछि व्यक्तिमा हुने परिवर्तनबारे चर्चा गर्न चाहन्छु ।
मौनता सकिएपछि ध्यान शिविरभित्र एक प्रकारको कोलाहल भयो । थुनेर राखेको तलाउबाट पानीको धार छताछुल्ल भएझैँ साधकहरु समूह बनाएर सजीव बहस गर्न थाले । कसैलाई साह्रै गाह्रो भए पनि अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा आनन्द लागेछ । कतिले बेकारमा दुःख बेसाएको भन्ने ठानेर ध्यान अवधिभर मनमनै आफैँलाई सरापेछन् । तर, अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा ठीक गरँेछु, यसले मेरो मनलाई अलिकति भए पनि शुद्ध र शान्त पा¥यो भन्ने ठानेछन् । कतिले त गुरुहरुले भनेजस्तै समवेदनाको अनुभव राम्रैसँग गरेछन् । उनीहरुले शरीरमा आनन्दै आन्दको अनुभव भएकाले गर्दा मनमा आनन्द पनि क्षणिक हुने र दुःख पनि क्षणिक हुने भन्ने विपश्यनाको मूलभाव नै ग्रहण गरेका रहेछन् । जे होस् त्यहाँ हरेक साधकको आफ्नै निष्कर्ष थियो ।
तर, एउटा कुरा सबैमा समान के थियो भने कसैले पनि यो ध्यान विधि बेकार हो, मलाई यसले कुनै असर गरेन र फेरि कहिल्यै आँउदिन भनेनन् । सायद ध्यान अवधिभर नबसी शिविर छोडेर फर्कनेहरुमा चाहिँ त्यस्तो धारणा थियो होला । तिनीहरु त्यहाँ अन्तिम दिन हुने कुरै भएन ।
मचाहिँ मानसिक समस्याबाट पीडित व्यक्तिको उपचार गर्ने व्यक्ति । मैले के अनुभव गरेँ त रु ध्यान गर्दै गएपछि व्रmमशः अनुभव हुँदै जाने समवेदना आखिरीतिर अति आनन्ददायक हुन पुग्छ रे । मैले एकाग्रताको कमीले होला, त्यो हासिल गर्न सकिनँ । तर, १० दिनसम्म शान्त वातावरणमा बाहिरी संसारबाट अलग, नयाँ कुराबाट टाढा, संवादहीन, मौन र आत्मकेन्द्रित भएर बसेपछि छुट्टै प्रकारको लाभ भयो । पुरानो मानसिक थकाइ कम हुनुका साथै मन शान्त भयो, अनेक कुराले दिमाग भरिने क्रम कम भएको अनुभव भयो ।
अझ मुख्य कुरा त मलाई फेरि पनि ध्यान बस्न आऊँ जस्तो हुन थाल्यो । ध्यान अवधिभर आफूले भोगेको शारीरिक कष्टको याद आएन बरु केले हो केले फेरि तानेजस्तो लाग्यो । अरूसँग बातचित गर्दै जाँदा थाहा भयो, त्यहाँ त २० पटकसम्म ध्यानमा बसिसकेका साधकहरु पनि रहेछन् ।
एक पटक ध्यानमा बसेर गएपछि फेरि बस्न आउनका लागि कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने रहेछ । ६ महिना कुर्न पनि हतार भएर कति त भारत गएर ध्यान बस्दा रहेछन् । मसँगै शिविरमा एकजना अमेरिकी नागरिक पनि थिए । उनी पहिलो पल्ट अमेरिकामै विपश्यक भएका रहेछन् । त्यसपछि भारत र नेपालमा पटक–पटक ध्यान बसेका रहेछन् । जुनसुकै धर्म, संस्कृति र मान्यताको व्यक्ति भए पनि पटक–पटक ध्यान गर्न मन लाग्ने । के त्यस्तो आकर्षण छ यसमा रु
म शिविरबाट फर्केपछि विपश्यनामा विशेष रुचि राख्ने मानिससँग सम्पर्क हुँदा बढी नै चासो लिएर सोधपुछ गर्न थालेँ । मसँग परामर्श गर्न आउने बिरामीमध्ये पनि कति त विपश्यना ध्यान बस्ने गर्दा रहेछन् । सोधपुछ गर्दै जाँदा के कुरा थाहा भयो भने धेरै पटक ध्यान बसी सकेपछि पनि व्यक्तिको स्वभावमा खासै परिवर्तन आउँदो रहेनछ । जीवनका सुख–दुःख, उतार–चढावप्रति द्वेष, राग, तृष्णा, घृणा साविक नै हुँदारहेछन् ।
तर, विपश्यक भने मिलेसम्म फेरि ध्यान शिविरमा बस्न जान आतुर भएको म पाउँछु । ध्यान पनि एक प्रकारको नशा वा लतजस्तै हुँदोरहेछ । सायद एकाग्र ध्यानमा बस्दा हाम्रो मस्तिष्कमा विविध रसायनिक पदार्थ पैदा हुन्छन् र तिनले आनन्दको अनुभूति दिलाउँछन् । त्यही अनुभव अथवा राग पैदा भएकोले नै ध्यानमा गइरहुँजस्तो लाग्दो रहेछ । पहिलो ध्यान शिविरको अनुभवपछि मैले बिरामीलाई उनीहरुको समस्या हेरेर मात्र विपश्यना ध्यानमा जाऊ भन्ने गरेको छु । विपश्यना सञ्चालन गर्ने गुरुले साधकमा अत्यधिक परिवर्तनको अपेक्षा राख्छन् । ध्यानपश्चात् साधकको मन शान्त र स्थिर होओस् भन्ने चाहन्छन् । विशेष गरेर दुःख र सुखमा समभाव राखी सबै कुरा क्षणभंगुर र परिवर्तनशील छ, कुनै कुरा पनि चीरस्थायी छैन, सबै कुराप्रति समभाव जगाउनुपर्छ भन्ने सोच पलाओस् भन्ने सोच्दा रहेछन् ।
तर, म साइकियाट्रिस्टको नाताले बिरामीलाई ध्यान गर भनेर पठाउँदा सर्वप्रथम उसको रोगमा के असर गर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । मेरो अनुभवमा विपश्यनाले मानसिक रोगको उपचार हुँदैन र उपचारका लागि ध्यान बस्न पठाउनु पनि हुँदैन । तर, अध्यात्मिक रुचीको व्यक्तिले ध्यानमा चाख दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई शान्ति र एकाग्रताका लागि ध्यानमा बस्ने सल्लाह दिन सकिन्छ । उनीहरुलाई अन्य कतिपय व्यक्ति सरह ध्यानकै लत लाग्न चाहिँ दिनु हुँदैन । विपश्यना ध्यानबारे मेरो निश्कर्ष यही हो ।
(मञ्जरी पव्लिकेसनले प्रकाशन गरेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा। विश्ववन्धु शर्माको पुस्तक ‘मानसिक स्वास्थ्यका विविध अनुभव’को एक अंश हो यो । यसमा संकलित सामग्री निकै उपकारी र ज्ञानवध्र्दक ठानेर प्रकाशकसँगको सहमतिमा हामीले प्रकाशन गरिरहेका हौं । पुस्तकका प्रत्येक अंश निकै उपयोगी छन्,जसलाई क्रमशः प्रकाशन गरिने छ ।)
२०७६ बैशाख ३० सोमबार १६:१०:०० मा प्रकाशित
साउनकाे पहिलाे साेमबारः देवघाटमा भक्तजनको भीड
चितवन, ६ साउन । पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा साउनको पहिलो सोमबार आज स्नान गर्न आउने भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । आइतबार देखिनै देवघाट आएर रात बिताइ
ज्योतिष शास्त्र के हो ? ज्योतिष फलादेश मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्छ भने कति प्रतिशत मिल्छ ? प्रश्न छ । ज्योतिषको फलादेश त शत प्रतिशत मिल्छ । ज्योतिष विज्ञान
आज चन्द्र ग्रहण, कुन राशीलाई के लाभ–हानी ?
काठमाडौं । आज असार ३१ गते मंगलबार । गुरु पूर्णिमाको दिन र आजै चन्द्र ग्रहण लाग्ने समय पनि । डेढ सय वर्षपछि गुरु पूर्णिमाकैै दिन चन्द्र ग्रहण लागेको यो
गृहिणीले दैनिक यी ५ काम गरेमा दरिद्री नाश हुने पक्का
एजेन्सी । सफल पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ भन्ने भनाइ घाम झैं छर्लङ्ग छ । असल महिला अर्थात् गृहिणीले पुरुषलाई दिने साथले जीवन सफल हुने कुरालाई
खेलको क्रममा घाइते भएका रसियन बक्सरको मृत्यु
नेपाललाई ८४ रनको लक्ष्य
पत्रकार जोनसन बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री
देउवाले नभेटेका रअ प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो सन्देश पठाए
सन् २००९ को ‘काण्ड’मा रोनाल्डोलाई सफाई
भारत विरुद्ध खेल्न नराइन र पोलार्ड वेष्ट इन्डीजको टोलीमा
पहिलो खेलमै नेपाल पराजित, कतार ४ विकेटले विजयी
कठिन प्रतियोगिता खेल्दै नेपाल, विकल्प छैन जितको
विश्वकप एशिया छनोटमा नेपालको पहिलो जीत
अनियमितताको आरोप लागेका वृद्ध पूर्वकर्मचारीद्वारा आत्महत्या